Google wepu bọtịnụ "lee onyonyo" na Google Images | Akụkọ akụrụngwa
Google wepu bọtịnụ "lee onyonyo" na Google Images
Ejiri ụlọ ọrụ Getty Images na Google nọrọ n'okwu ikpe. Onye nke mbụ boro nke abụọ ebubo kwado ịtọrọ mmadụ na nhọrọ gị iji budata onyonyo nwebisiinka site na ọrụ Google Images. Mgbe otu afọ gachara, ụlọ ọrụ ahụ ewepụla ikpe ahụ ma ha enweela nkwekọrịta.
Eziokwu bụ na ọ dị mfe ijide ihe oyiyi site na saịtị ọ bụla site na Google Images; Nchọgharị dị ọsọ ọsọ yana nhọrọ "Lee onyonyo" anyị nwere ohere ị ga-ahụ onyogho ahụ masịrị anyị na nha mbụ ya wee budata ya ka ejiri rụọ ọrụ ma emechaa. Mgbe nkwekọrịta ahụ Google na Getty Images eruola, Nhọrọ a akwụsịla ịdị.
Ọ bụrụ n'ị mee ọchụchọ na Google wee gaa na "Ihe oyiyi" taabụ, ị nwere ike ịhụ na mgbe ịpịrị nsonaazụ ọ bụla, enwere bọtịnụ furu efu na nhọrọ dị iche iche. Kpọmkwem, «Lee foto» adịkwaghị. Tụkwasị na nke ahụ, na nkwekọrịta nke abụọ ahụ mezuru, Google ga-egosiputa n'ụzọ doro anya karịa na ihe oyiyi nke onye ọrụ na-ele na ihuenyo ha nwere ike ịhụ ozi na-esonụ: "Ihe oyiyi nwere ike ịdabere na nwebisiinka."
Ugbu a, Google enwetala òkè ya. Ma nke ahụ bụ ị ga-enwe ike idobe ihe oyiyi niile nke ụlọ ọrụ na nsonaazụ gị, ọ bụrụhaala na e nyere isi ihe ndị ọzọ a bịanyere aka na ha. Agencylọ ọrụ ahụ rụtụrụ aka na ha erutela nkwekọrịta nkwekọrịta nke Getty Images ga-eweta ngwaahịa ya na ọrụ Google. Mgbe, Getty Images nwere olile anya na mmeghari a nke ndị na-ahụ maka Mountain Mountain ga-eme ka nleta nke ọrụ ha bawanye.; O doro anya na nhọrọ Google nke furu efu n'oge a mere ka ndị ọrụ na ndị okike ọdịnaya hụ ka ego ha na-ebelata ma ha ga-adị njikere oge niile iji kwuo ikike nwebisiinka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Google wepu bọtịnụ "lee onyonyo" na Google Images
JF López Cardona kwuru dijo
Agbanyeghị enwere ọtụtụ injin ọchụchọ
Zaghachi JF López Cardona
Onye na-efunahụ bụ Google, ebe enwere ike merie ya site na dwarf dị ka Getty, enwere injin ọchụchọ ndị ọzọ dịka nchọta yahoo, bling, duckduckgo, wdg ... ya oyiyi, ma hey… Bad mkpebi ma ọ dịkarịa ala ha ga-amanye ndị ọrụ ha ka ha chọọ ndị ọzọ, goodbye Google.
Otu nkata na-abịa na ngwa Xbox na iOS na gam akporo